Accueil > Gazetin'ny nosy > Voka-pifidianana : Ahiana mafy ny hisian’ny ady an-trano
Voka-pifidianana : Ahiana mafy ny hisian’ny ady an-trano
Matetika dia avy amin’ny raharaha pôlitika no ipoiran’ny ady an-trano amin’ny firenena iray. Raha ny zava-misy maneran-tany dia ny raharaham-pifidianana no tena fototra ny korontana amin’ny firenena. Iarahantsika mahita ny zavatra nitranga any Egypta amin’izao fotoana izao. Torak’izany koa ny ao Soudan mahakasika ireo sivily sy ny miaramila izay mibodo ny fitondrana tetezamita ankehitriny rehefa niongana ingahy El-Bechir. Ny antsika teto Madagasikara dia niaraha-niaina ny raharaha ny 2001 fa olana vokatra ny fifidianana no nitarika vonoan’olona nahatsiravina tamin’iny taona iny ka nahitana ny mpomba an’ingahy Ratsiraka Didier sy ny mpomba an’ingahy Ravalomanana Marc. Aza adinoana fa nahatratra 1000 mahery ny olona nogadran’ingahy Ravalomanana tamin’iny fotoana iny ary tsy voaisa intsony ny olona maty.
Ankehitriny indray dia mampanahy ny mpanara-baovao pôlitika fa indrindra ny fifidianana solombavambahoaka izay natao ny faha 27 may 2019 teo iny. Atahorana mafy ny mety hisian’ny korontana indray aorian’ny famoahana ny voka-pifidianana. Be loatra ny fitarainana tonga avy amin’ny faritra maro manerana an’i Madagasikara. Ny praiminisitra filohan’ny governemanta Ntsay Christian aza dia efa nilaza ny mba hahatony ny Malagasy rehetra eo ampiandrasana ny vokatra izay havoakan’ny Ceni (Vaomiera mahaleo tena momba ny fifidianana) sy ny HCC (Fahefana avo momba ny Lalàmpanorenana) izay hitsara ary hamoaka ny vokatra ofisialy amin’ity fifidianana ity taorian’ny nandoran’ny olona ny CENI tany Toliara ny faharoan’ny volana jiona teo rehefa nivoaka ny vokatra vonjy maika.
Gazety maro no efa nanambara fa distrika maro no mafanafana ankehitriny noho ny hala-bato tamin’ny fifidianana, hosoka ary kolikoly maro isan-karazany tany amin’ny birao fandatsaham-bato maro manerana ny nosy. Ankehitriny dia tonga eto Antananarivo avokoa izy rehetra ireo manao fanambarana an-gazety sy fitoriana any amin’ny HCC.
Tamin’ity fifidianana ity no nahitana mpiasan’ny SRMV (Section de recensement de matériels de vote) na ny Ceni any anivon’ny distrika nigadra noho ny hosoka nataony tamin’ny lisi-pifidianana tamin’ny kaominina maro hampandresena kandidà iray toa ny nitranga tany Ihosy.
Samy nahatonga tsy fankatoavana ny vokatra mivoaka amin’izao fotoana izao avokoa ireto faritra voalaza ireto: Toliara, Ambositra, Besalampy, Morafenobe, Marovoay, Fandriana, Bekily, Belo amoron’i Tsiribihina, Mahabo, Antananarivo Atsimondrano, Sakaraha, Betroka, Mananara Avaratra, Antananarivo faharoa, Soalala, Mahajanga, Antsiranana ary Toamasina. Santionany fotsiny ireo fa maro no distrika itrangan’ny tsy fankatoavana ny vokatra ankehitriny.
Aoka hazava ny resaka fa tsy mipetraka eo amin’ny kandidàm-panjakana ihany izany fa voakasika koa hatramin’ny tsy miankina sy ireo antoko tsy ao anatin’ny fitondrana. Samy milaza ny andaniny sy ny ankilany fa mangalatra izay nandresy sy mitarika amin’izao fotoana izao.
Fa isan’ny mafanafana ny ao Ambositra sy Betroka amin’izao fotoana izao.
Mahakasika ny ao Betroka dia nanambara ny solotenan’ny mpifidy avy any an-toerana omaly atalata faha 11 jona 2019 tetsy amin’ny toeram-pandraisam-bahiny Colbert fa mpandainga, mpanakorontana, mpampihorohoro ary mpifandray tendro amin’ny dahalo ingahy Paolo izay administratera sivily zanak’i Betroka. Navoitran’ireto raiamandreny avy any Betroka ireto ny raharaha basy tamin’ny andron’ny kapiteny Rafaraly izay nalainy an-keriny tamin’izy sefon’ny distrika tao amin’ity faritra ity. Be ny porofo nentin’izy ireo amin’izany teo anatrehan’ny mpanao gazety.
Mahakasika ny any Mananara Avaratra indray voalaza fa ny kaominina kely any ambanivohitra toa an’i Manambolo sy sy Tanambe dia be mpifidy noho ny tao amin’ny renivohitra koa. Tsy faly amin’izany ny vahoaka any an-toerana ka miandry ny mety ho fijerin’ny Ceni sy ny HCC fotsiny ihany.
Eo anatrehan’ny fitarainana maro sy ny fihantsiana efa manomboka mahazo laka ankehitriny dia tsara ihany no ilazana izany mba handraisan’ny tompon’andraikitra izay voakasika mba hisorohana ny loza dieny mbola tsy vaky ny korontana. Mampanahy ny olona maro ny trangan-javatra ankehitriny ka tsy tokony hatoritory ny fanjakana eo anatrehan’izany.